The Mermaid (2016) ရုပ်သံ/အကြည် ~ ဘလော့ခရီးသည်
The Mermaid (2016) ရုပ်သံ/အကြည်
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ရေသူမ နှင့် လူသားတို့၏ အချစ်ပြသနာတွေနှင့် ရောနှောထားပြီး
အချစ်တွေကြောင့် မုန်းတီခံရတဲ့ ရေသူမ ဘဝရဲ့ နှစ်ဘဝကြားတွေကို အထူး သရုပ်ထားတဲ့
အက်ရှင် အချစ်ဇာတ်ကြမ်း ဇာတ်ကားလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
546.4. MB သာရှိပြီး ၊ အကြည်လင်ဆုံး တင်ပေးထားပါတယ်။
Actors: Chao Deng, Show Luo, Yun Lin, Yuqi Zhang
Source: TS 720p X264 AAC -Mp4Ba
Sinopsis : Xuan's estate project involving reclamation of the sea threatens the
livelihood of the mermaids who rely on the sea to survive. Shan is dispatched to
stop Xuan and this leads them into falling for each other. Out of his love for Shan,
Xuan plans to stop the reclamation. Unfortunately, Shan and the other mermaids are hunted byahidden organisation and Xuan has to save Shan before it's too late...
The Mermaid (2016) ရုပ်သံ/အကြည် ကြည့်ရှုရန်